Lionel Messi oo laga waayey Shaxda 11-ka xiddig ee ugu fiicnaa 2020 oo ay ku dhawaaqay L’Equipe & Ramos kaligiis oo ka socda horyaalka La Liga – Gool FM
Haaruun January 4, 2021
(Yurub) 04 Jan 2021. Jariiradda ka soo baxda Waddanka Faransiiska ee L’Equipe ayaa ku dhawaaqay shaxda 11-ka ciyaaryahan ee ugu fiicnaa kubadda cagta sanadkii tagay ee 2020.
Lionel Messi ayaa boos ka waayey shaxdan, iyadoo laacibka kaliya ee laga soo qaatay horyaalka La Liga uu yahay Kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos.
Shaxda ayay Jariiradda L’Equipe ka dhigtay 4-4-2, waxaana ay go’aansatay inay goolhaye uga dhigto shaxdan shabaq ilaaliyaha Bayern Munich, iyadoo ka door-bidday goolhayaha Kooxda Liverpool ee Alisson.
Afarta daafac waxa ay u soo qaadatay Sergio Ramos, Alphonso Davies iyo labada xiddig ee ka wada tirsan Liverpool ee Virgil van Dijk & Trent Alexander-Arnold.
Joshua Kimmich iyo ciyaaryahankii hore ee Bayern Munich kaasoo hadda ka tirsan Liverpool ee Thiago ayaa khadka dhexe ka soo muuqday shaxdan, waxaana ku weliya Paris Saint-Germain ee Neymar oo dhanka bidix ee dhexe ka ciyaaraya iyo ciyaaryahanka Manchester City ee Kevin De Bruyne oo booska midig ee dhexe boos ka helay.
Weerarka Shaxdan waxaa hoggaaminaya laacibka shanta goor ku goor ku guuleystay Ballon D’or ee Cristiano Ronaldokaasoo 37 gool u dhaliyey Juventus iyo laacibka dhowaan ku guuleystay abaal-marinta xiddiga ugu fiican sanadka oo ay bixiso FIFA ee Robert Lewandowski kaasoo u dhaliyey 55 gool Bayern Munich 47 kulan oo uu u safay.
Taasi waxa ay ka dhigan tahay in kooxda reer Jarmal ee Bayern Munich oo ay ku guuleystay Champions League ay xiddigaha ugu badan ku yeelatay shaxdan, waxaana ay ku leedahay Robert Lewandowski, Thiago Alcantara (oo haatan ku sugan Liverpool), Alphonso Davies, Joshua Kimmich iyo Manuel Neuer.
Haddaba halkaan hoose ka eeg shaxda 11-kii xiddig ee ugu fiicnaa 2020 oo ay shaacisay jariiradda L’Equipe:-
Cristiano Ronaldo oo ceebeystay dhammaan 20-ka Kooxood ee haatan ka ciyaara horyaalka Premier League